အမျိုးသားတစ် ဦး ကိုတွေ့သောအခါအမျိုးသမီးများအဘယ်အရာများကိုကြည့်ရှုကြသနည်း။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Paco မာရီယာ Garcia က | | စုံတွဲနှင့်လိင်
ပထမ ဦး ဆုံးချဉ်းကပ်မှု၌အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်မတူဘဲကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ယောက်ျားသည်အရပ်ရှည်ရှည် (သို့) တိုသည်၊ ဆံပင်ရှိမရှိ၊ အဆီသို့မဟုတ်ဂျပိန်စသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအခိုက်အတန့်၌၊ စတိုင်လ်။ သူတို့သည်သင်မည်သို့ဝတ်စားဆင်ယင်သည်ကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မည် သင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အမျိုးအစား၊ ဖိနပ်နှင့်ရေမွှေးအမျိုးအစား.
အမျိုးသားများသတိရမည်မဟုတ်ပါ ငါ ၀ တ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေ အဲ့မိန်းကလေးဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကြိုက်တဲ့မိန်းမပဲ။ သို့သော်အမျိုးသမီးများသတိရကြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၌ရှိပါကအကဲဆတ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် အုပ်စုအတွင်းရှိအခြားလူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပုံအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားပြောဆိုနိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားထောင်သည်၊
အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စကားစမြည်ဝိုင်းလုပ်ပြီးသောအခါစုံထောက်အလုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စတင်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်မှု၊ ဝါသနာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။။ ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်သည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပို၍ နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဟာသဉာဏ်.
အမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးများကိုတန်ဖိုးထားသောအရေးအကြီးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသူတို့မှာရှိသည် Self- ယုံကြည်မှု, သူတို့ပဏာမရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်များသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ရှိသည်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါက၎င်းဇာတ်ကောင်အားကျွန်ုပ်တို့ခြိမ်းခြောက်ခြင်းမခံစားရသည့်အတွက်သူမကအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အခြားအက္ခရာစာလုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ယောက်ျားသည်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများကသူနှင့်ရယ်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပျော်စရာအချိန်ရစေနိုင်လျှင်လမ်း၏ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လှမ်းလိမ့်မည်။ ချီးမွမ်းထက်အများကြီးပို, သူတို့တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ် ငါတို့ထံမှလိမ္မာမှတ်ချက်များ, ငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယ်မောနိုင်စွမ်းရှိသည်။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏လုံခြုံရေးနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရရှိစေသည် သူတို့ကိုဘယ်လိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးပြsomeနာတချို့ကိုတောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ထိုသူသည်မည်သို့နားထောင်ရမည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
ယဉ်ကျေးမှုကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းစကားပြောဆိုမှုတစ် ဦး ခေါင်းစဉ်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနှင့်လက်ရှိအခင်းအကျင်းသည်လည်းကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - La Prensa Lara / El Confidencial
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » အမျိုးသားတစ် ဦး နှင့်တွေ့သောအခါအမျိုးသမီးများအဘယ်အရာကိုသတိထားမိပါသနည်း။